Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 10)
Waraaqaha, ciyaar loogu talagalay weelkaaga Android ee daqiiqadahaas caajiska ah
Si fudud oo toos ah loogu talagalay ciyaar caadi ah, Papercraft waxaa loo soo bandhigaa sidii arcade loogu talagalay smarwatch hoosta Android Wear.
Star Skater waa waxa cusub ee ka imanaya Studio-yada Halfbrick si aad noo hor dhigto skateboard-ka
Star Skater waxay ka qaadataa dhiirrigelinta qaabka muuqaalka iyo jilayaal fara badan si looga furo waddooyinka waaweyn ee Crossy Roads.
Rust Bucket waa qalab aad u badan oo tayo sare leh oo ku xeel dheer godka godka ee Nitrome
Nitrome wuxuu noo keenayaa miridhku baaldi ahaan sidii gurguuto tayo sare leh oo gurguurta dhammaan dhinacyada oo dhan iyadoo la adeegsanayo makaanik ciyaarta ku habboon.
Dagaalkii dhirta 2 wuxuu soo jeedinayaa iskudhaf weyn oo udhaxeeya MOBA iyo RTS
Dhirta Dagaal 2 waxay noo keeneysaa noocyo badan oo kala duwan oo hal ciyaar ah oo kordhinaysa tayada kan ugu horreeya ee na geynaya MOBA iyo RTS
Qiyaas oo sahamso wax kasta oo aad rabto Scribblenauts Unlimited
Khayaali ahaan wuxuu noqon doonaa hubka ugu awoodda badan Scribbleanuts Unlimited halkaasoo ereyada iyo sifooyinku yihiin wax walba.
Abuuraha Flappy wuxuu sii daayaa Cutubyada Swing 2
Nguyen wuxuu noo keenayaa abuurkiisa cusub qaab Swing Copters 2 oo ah ciyaar leh dheelitirnaan wanaagsan oo ku saabsan dhibaatada iyo taabashada gaarka ah ee retro.
Gods of Rome waa Fighter Street ee ilaahyada quraafaadka ah
Haddii aad rabto inaad ku yeelato kulan weyn qaabka Fighter-style-ka taleefankaaga Android laakiin mawduuca ilaahyada Olympian, Gods of Rome adiga ayaa iska leh.
In kabadan 30 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo labixiyay ayaa lasiidaayaa xiliga kirismaska
Maalmahan waxaad ka heli kartaa ciyaaro fiidiyow oo tayo sare leh oo loo soo bandhigay si loo daboolo baahiyahaaga xilliga firaaqada ee casriga casriga ah ee 'Android'
U beddelo casrigaaga 'Star Wars lightsaber' tijaabadii ugu dambaysay ee Google Chrome
Tijaabadii ugu dambeysay ee Chrome waxay soo jeedineysaa in taleefankaaga casriga ah loo beddelo laydh si uu ula kulmo askarta boqortooyada shaashadda kombiyuutarka
Habitica waxay noloshaada u rogtaa mid adiga kuu gaar ah oo RPG ah oo aad ku hormarinayso, ku jaan goynayso oo aad ku dhammaynayso hawlgallada
Habitica waxay rabtaa inay naftaada u rogto RPG oo aad hawlaha maalinlaha ah ugu badasho hawlgallo oo aad u qabato khasnado.
Sheeko shaki badan ayaa ku sugeysa 9 Tilmaamood 2: Ward
9 Faa'iidooyinka 2: Ward-ga wuxuu na horkeenaa dambi baare dhallinyaro ah oo ay tahay inuu soo ogaado cidda ku dishay Doctor Crow jasiirad aan faa'iido lahayn
Ugu safri adduunka oo dhan hal-abuurnimadan garaafka leh ee loo yaqaan 'Lost Horizon'
'Lost Horizon' ayaa ina hor dhigaya sheeko ka soo qaadata filimada Indiana Jones si loo ogaado waxyaalaha qadiimiga ah.
Fiidmeerta baseball si looga takhaluso kuwa ka soo horjeeda Baseball Riot
Baseball Riot wuxuu ku saleysan yahay xujooyinka iyo sheyga fiisikiska si uu kuugu deeqo dhamaan ciyaarta oo sidaas darteedna si aan macquul aheyn kuugu xiro
Barafleyda Wanaagsan Way Adag Tahay In La Dhiso waa xujo la jecel yahay oo aad ku tahay bahal isla markaana aad abuurto dad baraf wata
Ka imanaya Steam, Duufaan Wanaagsan Way Adag Tahay In La Dhiso hadda waa la heli karaa, ciyaar fiidiyow ah oo xujo ah oo leh garaaf iyo muuqaal dhammaystiran
Nin oday ah oo sita maaskaro sixir ah ayaa kugu sugaya madal weyn oo la yiraahdo Raacitaanka Tuugsiga
Barxad tayo sare leh dhammaan walxaha farsamo ee aynnu ka helno 'The Beggar's Ride' oo kugu ridi doonta kabaha nin oday ah oo awood leh
Da'da Boqortooyooyinka: Xukunka Adduunka waxaa loo soo bandhigaa sidii RTS oo leh moodada Freemium
Microsoft waxay soo bandhigtay Da'da Boqortooyooyinka: Dunida Xukunka ee Dukaanka Play-ka si ay kuugu keento sheekadan inkasta oo ay la socoto nooca freemium.
Hoyga burburka wuxuu helayaa Cusbooneysi cusub oo ay ku jiraan Xayawaanada guryaha laga saaray, Ka saarida badbaadayaasha, iyo inbadan
Xayawaanada guryaha lagu rakibo ayaa lagu soo daray cusbooneysiinta Hoyga Fallout ee cusub oo dejinaya xawaaraha Bethesda si ay u keento ciyaaro fiidiyoow badan sanadka soo socda.
Isku dhaca Qabiilooyinka wuxuu helayaa mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu weyneyd ee lala yeesho Town Hall 11
Townhall 11 waa mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu weyneyd ee laga helo Dagaalkii Qabiilooyinka, mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee ugu wanaagsan Android
Qaado kaniiniga barafka oo qaado meelaha dhaadheer ee kaa sugaya Snowboard Party 2
Xisbiga barafka loo yaqaan 'Snowboard Party 2' wuxuu ku geynayaa buuro baraf qabow ah si aad u muujiso xirfadahaaga barafka.
U duuli hawada ku dhaceysa dhammaan noocyada dhismayaasha Mad Aces
Arcade loogu talagalay cayaaraha caadiga ah ee wanaagsan ayaa kugu sugaya Mad Aces oo leh awooddeeda weyn iyo khasnaddeeda ciyaarta.
Sniper Fury wuxuu kuu dhigayaa hortiisa muuqaalka teloscopic si looga takhaluso cadawga midba midka kale
Gameloft wuxuu mar kale noo keenayaa 3D toogte laakiin markan loogu talagalay waxa ay noqon doonto in la galo maqaarka toogte caan ah.
LEGO Ninjago: Hooska Ronin wuxuu ka yimaadaa 3DS mobilkaaga
LEGO Ninjago: Hooska Ronin wuxuu soo jeedinayaa arcade weyn oo ka timaada Nintendo 3DS si loogu rakibo moobilkaaga Android.
Ku celi kuwan cirbixiyeenada waalan markabka Xawilaadda Hawada
Wareejinta Hawada ayaa ina hor dhigeysa ciyaar fiidiyoow ah oo ku xiran fudeydkeeda iyo waxa ay tahay in laga badbaadiyo cirbixiyeennada waalan dhimashada.
Aralon: Forge iyo Ololku waa 3D RPG oo kaa yaabin doona dunidan ballaadhan
Himilada Aralon: Beenta iyo Ololku waxay kugu dheeli karaan xeelad adiga oo raba inaad soo koobto wax ka badan intaad la yeelan karto adduun ballaadhan oo aad ku dhex socoto.
Ibliis Cunto waa faneed faransiis ah oo aadan kuheleynin ilbiriqsi nasasho ah
Ibliis Cunto waa faneed faransiis ah oo ay tahay inaad ogaato sida loo toogto ama loo difaaco naftaada waqtiga saxda ah si aad uga baxdo gacanta boqolaal cadaawayaal ah
Monster Castle waa difaac munaarad leh ciyaartoy badan
Monster Castle waa difaac munaarad ah oo leh dhinacyo badan oo ciyaartoy badan oo kugu xidhi doona bilo markaad abuureyso xulafo udhaxeysa ciyaartoyda.
Tengami waa riwaayad sixir ah oo la furay ka hor intaadan jeclaan buug jaban oo dhimanaya
Tengami waa sheeko xiiso leh oo loo helay sida buug Jabbaan ah oo dhimanaya oo leh qaab jaantus ah oo aad u wanaagsan oo jacayl kugu ridi doona.
Rayman Adventures waa sheeko la yaab leh oo loogu talagalay moobilkaaga Android
Rayman Adventures wuxuu na hor dhigayaa barxad weyn oo aan ku xakamayn karno mid ka mid ah labadeeda jilaa: Barbara iyo Rayman laftiisa.
Ciyaaraha Telltale si ay u sii daayaan dhacdooyin taxane ah oo Batman ah sanadka 2016
2016 waa sanadkii imaatinka Batman ee gacantii Ciyaaraha Telltale iyadoo loo maraayo habkaas gaarka ah ee loo abuuro riwaayadaha garaafyada.
Amazon waxay bilaabeysaa dhulka hoostiisa mara ee Amazon in kabadan 1.000 barnaamijyo iyo ciyaaro gebi ahaanba bilaash ah
Waxaad hadda soo dejisan kartaa dhulka hoostiisa mara ee Amazon si aad uhesho wax kabadan 1.000 kulan oo bilaash ah oo ay kujiraan Star Wars: Knights of the Old Republic
Goor dhow waxaad awoodi doontaa inaad ku bixisid barnaamijyada iyo cayaaraha dheelitirkaaga Google Play
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho dheelitirka Google Play si aad ubixiso kala badh ciyaarahaas iyo barnaamijyada aad rabto inaad ka iibsato dukaankan dalwaddii.
'Raac Santa' ayaa ku soo laabtay Kirismaska ​​ciyaar cusub iyo layaab badan
Google wuxuu dib noogu soo celinayaa 'Raac Santa Claus' si aan ugu raaxeysano dhamaan waxyaabaha layaabka leh ee ay la yeelanayaan kuwa yaryar ee guriga ku jira ee ka socda shabakada iyo barnaamijka.
Ciyaarta wasakhda ah ee WhatsApp iyo cabsida laga qabo inay lumiso booskeeda xukunka
WhatsApp ayaa hadda xannibaysa farriimaha dadka isticmaala u qaadaya Telegram, iyagoo ka dhigaya farriimo aad u sarreeya oo qoraal ah.
Cube Jump waa ciyaar fiidiyoow fudud, balwad leh oo xamaasad leh oo adeegsanaysa qayb ka mid ah gameplay Wadooyinka Crossy Roads
Cube Jump waxaa lagu dhiirrigeliyey qayb ka mid ah gameplay 'Crossy Roads' si ay noogu keento ciyaaro dhakhso leh, dhaqso leh oo la qabatimo oo ku saabsan moobilkaaga Android.
Masterclass jilitaanka dareeraha ah ee ciyaartan weyn ee loo yaqaan Puddle +
Haddii aan raadineyno ciyaar ka duwan Puddle-ka kale + waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan ku dhegi karno Play Store.
Difaac qasrigaaga dhulka hoostiisa ah ee difaaca munaaraddan asalka ah ee loo yaqaan Digfender
Digfender waa ciyaar difaac munaarad ah oo leh heshiis gameplay oo kala duwan laakiin mid si dhakhso leh kuugu xidhi doona midabadaas fidsan iyo dhammaystir weyn.
Skeletomb, godod aan dhammaad lahayn ayaa kugu sugaya qoob-ka-ciyaarkan dib-u-dhaca ah ee leh taabashada RPG
Skeletomb waxay u taagan tahay gododkeeda si aan kala sooc lahayn loo soo saaray iyo qaabka muuqaalka ah ee ujeeddadiisu tahay waxyaabo kale oo aan ahayn cayaaro kale oo fiidiyoow ah.
Riig weyn oo cusub ayaa ka yimid Nitrome oo wata Gopogo
Gopogo waa barxad weyn oo laga helo istuudiyaha oo la yaab leh shaqadeeda wanaagsan ee abuurista asalka fiidiyowga fiidiyowga oo diiradda lagu saaray aaladda.
Ku biir xoogga Star Wars: Galaxy of Heroes
Kahor intaysan imaan Star Wars cusub, waxaan haynaa tan Star Wars: Galaxy of Heroes oo leh dagaal salka ku haya iyo tayo farsamo weyn
Bullet Boy waa ciyaar xiiso badan oo qaab faneed leh oo leh qaab muuqaal ah oo weyn oo jacayl kugu ridi doona
Rasaasta Wiilku waxay qiimo badan ku leedahay mid kasta oo ka mid ah curiyeyaasheeda oo ka kooban arcade aad u weyn oo aadan tabi karin.
Mini Racing Adventures, oo ah ciyaar tartanka baabuurta ku habboon dhagaystayaasha oo dhan
Maanta waxaan soo bandhigeynaa oo kugula talineynaa Mini Racing Adventures, ciyaar tartanka gawaarida oo ku habboon qoyska oo dhan.
Pixel Dead, ciyaarta dilka zombie-ka ee qaabka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Minecraft graphic style'
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Pixel Dead, ama wixii la mid ah, ciyaar dil zombie bilaash ah oo loogu talagalay Android qaabka ugu wanaagsan ee Minecraft.
Lara Croft GO waxay u safreysaa godka dabka ballaarin cusub iyo qiimo dhimis 50% ah
Lara Croft GO waxay ka mid ahayd waxyaabaha layaabka leh ee ugu wanaagsan sida ciyaar fiidiyoow ah oo sanadkan dhaceysa oo naga tagaysa. Hadda bilaabi ballaarin weyn
Hadda waad ciyaari kartaa Futurama: Game of Drones oo ku saleysan taxanaha animation ee Matt Groening taasna waxay nagu qaadaysaa xujo weyn.
Google wuxuu sii daayaa Android Studio 2.0 oo leh emulator kaas oo labalaab ka dhakhso badan
Istuudiyaha Android wuxuu hadda ka mid yahay jawiga ugu wanaagsan abuurista barnaamijyada. Waxaa loo cusbooneysiiyay 2.0 iyada oo xoogaa horumar ah oo waxqabad muuqda ah.
Call of Champions waa MOBA oo aad wajihi doontid ciyaartoy kale 5-daqiiqo oo ciyaaro ah
MOBAs waxay ku jiraan moodal iyo Call of Champions for Android waa tusaale cad oo ah sida ay rabaan inay uga guuleystaan ​​aaladaha mobilada
Sheeko weyn oo shaki badan ayaa ku sugeysa adiga oo adeegsanaya Lifeline 2 kaas oo daawashadaada 'Android Wear' ay kaa caawin doonto
Lifeline 2 waa ciyaar fiidiyoow ah oo go'aamada aad gaartaa ay ku dambayn doonaan dhammaad ka duwan iyo inaad ka ciyaari karto Android Wear-kaaga.
Horizon Chase waa tartan caan ah oo lagu soo celin doono xusuusta halyeeyga Out Run
Haddii aad ku jahwareeraysay 'SEGA's Out Run', ma seegi kartid Horizon Chase-kan weyn ee leh muuqaalkiisa muuqaalka weyn iyo xawaaraha jabka.
Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2016 ee SEGA, oo ah jilid weyn oo ka kooban xamaasadda kubbadda cagta laga bilaabo calaacasha gacantaada
Laga soo bilaabo calaacasha gacantaada jilitaan weyn oo kubada cagta ah oo leh Maamulaha Kubada Cagta ee SEGA Mobile 2016 si uu u noqdo tababare weyn
Habaaryahannada Habaarku waa khawaarij iyo isugeyn leh walxaha RPG oo aad ugu eg sida Tooshka weyn
Halyeeyada Habaarku wuxuu isku daraa RPG iyo khawano iyo waxyaabo kala jajaban si uu noo geeyo khariidado waaweyn iyo taabashada kartoonada ah ee xusuusta u keenaya Torchlight.
Oddworld: Munch's Oddysey wuxuu ku degaa Android si uu noogu keeno duni 3D ah oo ay ka buuxaan xujooyin
Haddii aad jeceshahay inaad ku qosasho ciyaar fiidiyow ah oo Oddworld ah: Munch's Oddysey wuxuu noqon karaa xulasho weyn dhammaadka usbuuca.
Cusbooneysiin cusub oo weyn oo loogu talagalay Minecraft Pocket Edition oo leh Redstone, bakayle iyo waxyaabo kaloo badan
Minecraft Pocket Edition waxay heshaa dhowr war oo xiiso leh kuwaas oo aan ku muujin karno Redstone si loo abuuro wareegyo iyo habab adag.
Apocalypse: Milkiilayaasha Caalamka sida toogto meesha ficilku uusan joogsan doonin oo noqon doona mid aad u jahwareersan
Qiyaasta: Milkiilayaasha Caalamka ayaa naga hor imanaya seddex jinsi oo ka socda seddex meere oo kala duwan oo loogu talagalay qabsashada adduunka.
Lost Echo waa ciyaar xeel dheer oo saynis ah oo leh jacayl jaceyl
Riwaayad jaantus ah oo loo yaqaan 'Lost Echo' oo aan isku dhejinayno kabaha Greg, oo ah inuu helo gabadhiisa lumay.
Crimsonland waa toogte kaa ilaalin doona dhiiga
Crimsonland waa ciyaar fiidiyoow toogasho ah oo ku sugeysa adiga .9,99 XNUMX si ay kuu tusto inay jiraan kumanaan shisheeyaha adduunka ah
Difaaca Artificial, Istaraatiijiyad-waqtiga dhabta ah ee adduunka aad tahay mashiinka
Dabaq difaac oo aan ku nahay mashiin waana inaan iska difaacnaa kuwa ku soo xadgudbay Difaaca Artificial.
Ace of Arenas, MOBA tartan ah oo kaa dhigi kara jacayl
Ace of Arenas waxay leedahay dhammaan walxaha si ay u noqoto mid ka mid ah MOBA-yada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android sababtoo ah cayaaraha degdegga ah iyo suufka saxda ah ee saxda ah.
Soda Dungeon, isugeynta gaarka ah ee aad ku caawin doonto boqolaal geesiyaal ah si ay uga guuleystaan ​​halyeeyada ugu halista badan
Soda Dungeon waa jilid aad u fiican oo leh taabashada RPG oo kugu sasabi doonta inaadan joojin inaad ciyaareyso toddobaadyo badan.
Dungeons Deep of Doom, RPG weyn oo tayo sare leh oo leh muuqaal muuqaal ah retro 2D
Dungeons-ka qoto dheer ee cadaabku waa RPG weyn oo leh xulasho xikmad leh oo ku saabsan makaanikada ciyaarta iyo sawirada gadaal.
Dhammaan ciyaaraha fiidiyowga ee Nintendo ee casriga ah ayaa bilaash noqon doona
Nintendo wuxuu qorsheynayaa inuu ku dego barnaamijyada casriga ee kala duwan oo bilaash ah
Apocalypse Meow, halkaas oo bisaduhu yihiin ragga xun eeyahana badbaadiya
Bisadaha ka dhanka ah eeyaha si loo badbaadiyo ama looga ciribtiro bini-aadamka galax ee ciyaartan arcade oo leh sawiro wanaagsan iyo saameyn fiican.
Super Boys - The Big Fight, ama maxaa noqon lahaa Super Smash Bros ee mobilada
Haddii aad rabto inaad xasuusato Super Smash Bros, waqti badan ha ku qaadin inaad rakibto Super Boys - The Big Fight, ciyaar aad ka heli karto 53 dagaalyahanno kala duwan.
BeatNiks, abuuro oo korsato xayawaankaaga u gaarka ah ee u kora sida ku xusan muusikada aad ka dhageysato Spotify
BeatNiks waa ciyaar fiidiyoow ah oo aad u baahan tahay inaad daryeesho xayawaan rabaayad ah oo kori doona iyadoo loo eegayo dhadhankaaga muusikada ee ku saleysan Spotify.
Starific, xujo gaar ah oo ay ku guuleysato psychedelia iyo qaab muuqaal ah oo gaar ah
Starific wuxuu noqon karaa mid ka mid ah xujooyinka ugu fiican sanadka maxaa yeelay wuxuu leeyahay wanaag badan oo laftiisa ah wuxuuna na xusuusinayaa cayaaro fiidiyoow caan ah sida Pang ama Space Invaders.
Shooty Skies waa toogasho weyn oo ka timaadda abuurayaasha Waddooyinka Crossy
Abuureyaasha Wadooyinka Crossy Roads waxay dib ugu soo laabanayaan dagaalka iyagoo wata arcade cusub oo ka mid ah kuwa wanaagsan oo ku dhex yaal toogasho la yiraahdo Shooty Skies
Blossom Blast Saga, xujo cusub oo leh wax badan oo ka yimid King marka loo eego Activision
King wuxuu noo keenayaa xujo kale oo shinni ah sida halyeeyada ah inuu raaco cinwaanadii hore ee gantaalaha ahaa ee ciyaar fiidiyoow cusub ah.
4 dagaal oo dagaal halkaas oo feer iyo laad ay yihiin halyeeyada
4 Ciyaaraha dagaalka ee Android halkaasoo laadadka iyo feedhku ay yihiin waxyaalaha guud ee laga wada baxo si looga baxo dagaalada midabbada duulaya.
Toddobada 7 ee khadka tooska ah ee multiplayer toogas ee loogu talagalay Android
7 toogteyaal multiplayer ah oo ku shaqeeya Android oo hilibka oo dhan saaray dabka si ay noogu diyaariyaan sanad ku habboon noocyadan ciyaaraha.
2016 wuxuu noqon doonaa sanadka loogu talagalay toogtayaasha multiplayer ee Android
Bisha soo socota waxaan la imaan doonnaa toogte ciyaartoy badan oo multiplayer ah oo Android ah oo calaamadeyn kara wadada sanadkaas 2016 iyo Counter Strike.
Faliput Pip-Boy oo hadda laga heli karo taleefankaaga casriga ah ee Android
Saaxiibka ap Pip-Boy ayaa hadda laga heli karaa Android si loo tijaabiyo demo oo si habboon loogu rakibo taleefankaaga casriga ah maalintaas, Nofeembar 10.
Muxuu Nintendo u burburayaa ka dib markii lagu dhawaaqay ciyaarteeda moobiilka?
Ciyaarta ay shaacisay Nintendo, Miitomo ma qancinayo maalgashadayaasha ama isticmaaleyaasha. Waxaan falanqeyneynaa waxa ku dhacaya shirkaddan iyo mustaqbalkeeda Android.
10 ciyaarood oo gadaal gadaal u ah Android oo aadan tabi karin
On Android waxaan ka heli karnaa helitaanka dib-u-habeynta ciyaaraha fiidiyowga casriga ah sida Super Dragon, Out Run ama Final Fantasy VI.
Activision waxay ku iibsaneysaa abuure Candy Crush Saga KING $ 5.900 bilyan
Shirkada Activision waxay ku iibsatay KING $ 5.900 bilyan, taasoo ka dhigeysa Candy Crash Saga iyo Candy Crash Saga Soda qayb ka mid ah joornaalkeeda.
Counter Strike iyo quraafaadkiisa "Dabka godka" ugu dhakhsaha badan Android-kaaga
Weerarka hal-abuurka ah ee 'Counter Strike' waxaa hoostagaya koox doonaysa inay u soo rarto Android si ay dabkan godka mar kale ugu dhacdo!
Pocket MapleStory, MMORPG-ga caanka ah wuxuu ku degaa Android si loo siiyo ciyaar badan
Haddii aad rabto MMORPG wanaagsan oo ku saabsan taleefankaaga Android, ha sugin wax intaas ka badan oo u tag si aad u soo degsato cayaartan fiidiyaha ah ee loo yaqaan 'Pocket MapleStory'.
Lara Croft mar kale Tomb Raider 2, soo celinta a classic
Lara Croft waxay ku sugeysaa adiga oo ku soo laabanaya qabriga Raider 2 ee caadiga ahaa ee Android. Dhamaan tacabur wanaagsan oo leh naqshadeynta 3D ee aad ugu raaxeysan doonto mobilkaaga.
Taxanaha TV-ga wuxuu la soo noqonayaa Walking Dead No Man Land
The Walking Dead No Man's Land wuxuu raacayaa taxanaha TV-ga gebi ahaanba isaga oo leh fiidiyow ku saleysan dagaal fiidiyoow ah oo kugu dhejin doona.
Harada Indigo, xiisaha naxdinta leh ayaa kugu sugeysa Halloween-kan
3D-ka gudaha Indigo Lake waa mid aad muhiim u ah inaan isku mashquulinno baqdin argagax leh oo ka dhaceysa jasiirad lamadegaan ah oo qarsoodi ah in la xalliyo.
Sanitarium, muuqaal naxdin leh oo ku saabsan Android-kaaga Halloween
Sanitarium waa soo noqoshada muuqaal naxdin leh oo ku saabsan Android oo ka yimid gacanta DotEmu, oo horeyba ugu xeel dheer khabiirada dekadaha ciyaarta fiidiyowga halyeeyga ah.
Cuf isjiidadka ayaa lagu tiriyaa iyo waxyaabo badan oo ku saabsan ciyaarta fiidiyowga ee gaarka ah Inta udhaxeysa
Dhex-dhexaadku waa mid ka mid ah ciyaarahaas khaaska ah ee ku jahwareersan codkiisa, daaweynta muuqaalkiisa, xujooyinkiisa iyo waxyaabaha wanaagsan ee ay ka kooban yihiin.
Magaca caanka ah ee Titanfall ayaa ku sii jeeda Android sanadka 2016
Titanfall waa xayeysiis u taagan shirkad tayo sare leh oo heshay abaalmarino badan waxayna imaan doontaa Android sanadka soo socda.
Amazon waxay siisaa barnaamijyo iyo ciyaaro fiidiyow ah oo bilaash ah oo lagu qiimeeyo € 63 oo loogu talagalay Halloween
Amazon waxay ku soo noqotey dagaalka iyadoo wata xirmo bilaash ah oo barnaamijyo iyo ciyaaro fiidiyow ah si loogu dabaaldego Halloween dadka isticmaalana way ku raaxeysan karaan waxyaabaha ugu fiican.
Miitomo waa ciyaartii ugu horeysay ee mobile ee Nintendo
Miitomo waa kan ugu horreeya shantaas barnaamij oo aan arki doonno in la heli karo labada sano ee soo socota waana aasaaska waxa xiga.
Berri Nintendo wuxuu soo bandhigi doonaa ciyaarta ugu horeysa ee Android
Agaasimaha guud ee Nintendo ayaa xaqiijiyay in Nintendo uu bilaabi doono ciyaarta ugu horeysa ee Android berri, 29-ka Oktoobar. Pokemon A ayaa u socda Android
Shan kulan oo cabsi leh oo aadan ku seegi karin Android-kaaga Halloween
5 ciyaarood oo cabsi leh oo aadan seegi karin habeenkaas Halloween ee soo dhowaanaya toddobaadkan halkaasoo argaggixiso ay ka qaadato door dhab ah.
Halloween Runner, orodyahan-qaab ciyaareedka Halloween ee ku cajab gelin doona
Maanta waxaan soo bandhigeynaa ciyaar Halloween ah oo loogu talagalay Android, gebi ahaanba bilaash ah iyo qaabka ugu nadiifsan ee ciyaaraha Orodyahanka kuwaas oo aad ugu guuleysta Android.
Nintendo oo ku saabsan in ay shaaca ka qaado kulankeedii ugu horreeyay ee fiidiyoowga ah ee qalabka moobiilka
Nintendo waxay u yeertay saxaafada toddobaadkan shir jaraa'id oo ay ku soo bandhigi doonto ciyaartiisii ​​ugu horreysay ee fiidiyowga moobiilka.
Baro awoodaha alchemy ee Alchemix
Alchemix waxay dooneysaa inay ku dhex marto aduunka alchemy si aad u ogaato waxyaalaha ay ku adagtahay iyo dareeraha ay tahay inaad ku xakameyso mobilkaaga.
Shaqo gabay ah oo u dhigantaa Prune
Prune waa waayo-aragnimo muuqaal iyo mid firaaqo ah oo ina geynaysa meelo kale oo boosasku ku raaxaystaan ​​oo si qurux badan u muusig u noqdaan.
Mid ka mid ah abuurayaasha 'Monument Valley' ayaa noo keenaya xujada yar ee Trick Shot
Trick Shot waa xujo aad u fiican oo aanad seegi karin haddii aad jeceshahay nasashada iyo yaraanta taallada taallada.
Viva Sancho Villa, oo ah madal tayo sare leh oo loo yaqaan 'Hack & Slash platform' dhammaan dhinacyada ay leedahay
Viva Sancho Villa waxay leedahay tayo farsamo oo weyn oo si dhakhso leh loogu xaqiijiyo qaabka muuqaalkaas gaarka ah iyo saamaynta weyn.
Mos Speedrun 2, madal sheydaan iyo madadaalo fiican
Mos Speedrun 2 waa barxad cabsi iyo shaydaan kaa qaadeysa inaad ku raaxaysato ciyaaro dhakhso leh oo ay ka buuxaan heerar leh naqshad weyn.
Ku qabooji muusikada ciyaarta kubbadda farsamada leh Fallen
Dhacday ayaa ina xusuusin kara nooc ka mid ah kubbadda loo yaqaan 'pinball' halkaas oo giraangiraha midabbada saddex-midab ahi ka taxadari doonaan isku-dhafka leh kubbadaha dhacaya.
Dead Ninja Mortal Shadow, ciyaar ninja ah oo aad ku noqon doonto hooska dhimanaya
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa ciyaar ninja oo ah qaabka ugu nadiifsan madal isku dhafan dhammaan ama ka wanaagsan ciyaaraha madasha caadiga leh qaab dabacsan oo aadan awoodin inaad ciyaarta joojiso.
Ka baxso, mid kale oo ka mid ah ciyaarahaas balwada leh ee loogu talagalay Android ee aadan ku seegi karin boosteejadaada
Maanta waxaan idiin soo bandhigayaa baxsad, mid kale oo ka mid ah ciyaarahaas balwadda leh oo aadan u waayi doonin bartaada (terminal)-ka Android-ka ah isla markaana aanad awood u yeelan doonin inaad joojiso ciyaarta ku soo noqnoqota.
NVIDIA's GeForce NOW Game Platform Streaming Platform Hada Waa Laheli Karaa
NVIDIA waxay hada bilawday barnaamijka 'GeForce NOW' oo leh 70-kulan si ay ugu raaxeysato ciyaarta ugufiican adigoo adeegsanaya qalabkaaga SHIELD.
Cajiib Jack, oo ah ciyaar madadaalo xasaasi ah oo loogu talagalay Android kaliya 0,10 euro
Maanta waxaan soo bandhigeynaa oo kugula talineynaa Cajiib ah Jack, oo ah ciyaar madadaalo xasaasi ah oo loogu talagalay Android oo isku darsameysa midka ugu fiican Sonic iyo Super Mario Bros hal ciyaar. Hadda dalab xaddidan oo keliya 0,10 euro.
Joomateri Dash, ciyaarta aan macquul aheyn ee Android ee aadan awoodi doonin inaad joojiso ciyaarta
Maanta waxaan u qaadaneynaa dhowr ciyaarood Geometry Dash, ciyaarta aan macquul aheyn ee Android ee aadan awood u yeelan doonin inaad joojiso ciyaarta taasna waxay kugu xiri doontaa bilowgii
Waxa ku cusub Cravia Crack waxaa loo yaqaan Trivia Crack Kingdoms waana wax laga naxo
Trivia Crack Kingdoms waa ciyaar xamaasad leh oo la qabatimay abuureyaasha Trivia Crack iyo mowduuc la mid ah, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin labada weyn.
U abuur jasiiraddaada janno jilayaasha caanka ah ee Jannooyinka
In Minions Paradise waxaan lahaan doonnaa ujeedada ah abuuritaanka jasiirad janno ah oo siisa dhammaan noocyada madaddaalada astaamahan saaxiibtinimada leh.
Ku garaac madaxa kaa soo horjeeda si aad ugu garaacdo Drive Ahead!
Horay Usoco! waxay soo jeedineysaa in lagu galo horyaalada burburka gawaarida oo dhan hal ciyaar ama labo ciyaaryahan.
Cloud Chasers, ciyaar fiidiyoow badbaado ah oo aan ku caawin doonno aabaha iyo gabadhiisa inay tahriibaan
Clouds Chasers waa ciyaar ay tahay inaan ka caawinno qoys inay ka gudbaan shanta lamadegaanka cadaabta ah si ay u gaaraan dhulkii loo ballan qaaday.
Laga soo bilaabo abuurayaasha World of Goo waxaa ka yimaada Subterfuge oo leh qadar culus oo istiraatiijiyad ah iyo ciyaartoy badan
Laga soo bilaabo abuurayayaashii World of Goo waxaa ka yimid Subterfuge, ciyaar fiidiyoow ah oo u ololeysa istiraatiijiyadda iyo diblomaasiyadda oo horumar ku jirtay muddo 3 sano ah.
RAD Boarding, cusub oo ka socda Noodlecake Studios oo ah qaab looxa barafka lagu duubo
Istuudiyaha Noodlecake wuxuu noo keenayaa jawharad yar oo kale oo leh RAD Boarding oo raacaya raadadkii Ski Safari ee dhowaan la bilaabay ku dhowaad ku dayashada ciyaarta.
Minecraft: Habka sheekada, asalka ciyaarta fiidiyowga ee halyeeyga ah ee uu abuuray 'Notch' hadda waa run
Ciyaaraha Mojang iyo TellTale ayaa sheekada nooga dhigaya asal ahaan kulankaan fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'Minecraft: Story Mode'
Sonic Dash 2, hedgehog-ga quraafaadka ah wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka isaga oo orodkiisa runta ah ee orodyahanka aan dhammaadka lahayn
Orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh Sonic Dash 2 iyo jilayaashaas cusub ee ku biiraya tacaburka si ay ugu raaxaystaan ​​jinsiyadaha sheydaanka.
Google Play Store waxaa dib loogu qaabeyn doonaa barnaamijyada / ciyaaraha fiidiyowga iyo madadaalada qaab cusub
Dhawaan waxaan heli doonaa cusbooneysiinta cusub ee Google Play Store oo yeelan doonta waxyaabaha loo qaybiyay barnaamijyada / ciyaaraha fiidiyowga iyo madadaalada.
Hoyga burburka wuxuu ku helayaa Cusbooneysiin Cloud Cloud, Habka Badbaadada, iyo Inbadan
Hoyga dhaca wuxuu helayaa cusbooneysiintiisii ​​ugu horreysay iyadoo la adeegsanayo keydinta daruuriga ah, qaabka badbaadada iyo waxyaabo kaloo badan oo ku daraya waxyaabaha ciyaarta ku jira.
Samsung waxay soo bandhigeysaa barnaamijka Tuner Game kaas oo loogu talagalay in lagu habeeyo qaababka sawirada ee ciyaar kasta oo fiidiyoow ah
Game Tuner waa barnaamij diyaar u ah inuu wax ka beddelo muuqaalka muuqaalka muuqaalka ah ee ciyaaraha lagu dhejiyay Galaxy S6 edge + iyo Galaxy Note 5.
5 ciyaarood oo fiidiyow ah oo khaas ah oo xujooyinku iskaga mid yihiin
5 ciyaaraha fiidiyowga ee Android ee wax wadaaga: xujooyinka. Shan kulan oo aadan ka maqnaan karin si aad u hesho nooc kasta oo habab ah oo noocan ah.
3 fure oo lagu doorto mobilada ugu fiican ee lagu ciyaaro
Ma waxaad raadineysaa taleefan aad u isticmaali doonto gaar ahaan cayaaraha? Maanta waxaan ku sharaxeynaa sifooyinka muhiim u ah moobilka lagu ciyaaro.
Qeybta ugu horreysa ee Minecraft: Sheekada sheekadu waxay imaan doontaa Oktoobar 15
Minecraft: Habka sheekada waxaa laga sii deyn doonaa Oktoobar 15-ka Dukaanka Play-ka iyada oo loo yaqaan 'TellTale' oo u janjeera dhinaca garaafyada oo aad go'aanno ku gaari doonto
Niantic, Nintendo iyo Game Freak ayaa ku biiraya xoogaga si ay noo keenaan ciyaarta dhabta ah ee la kordhiyay ee Pokemon GO
Pokémon GO waa sharadka weyn ee saddexda waaweyn sida Niantic, Nintendo iyo Game Freak si loo abuuro ciyaarta fiidiyowga dhabta ah ee la kordhiyay Pokémon GO.
Minecraft: Pocket Edition ayaa lagu cusbooneysiiyay xakamaynta iyo taageerada ciyaartoy badan oo ka kala socota dhuftoyada kala duwan
Minecraft Pocket Edition ayaa la cusbooneysiiyay iyadoo la taageerayo kantaroolayaasha iyo cayaaraha ciyaartoy badan iyadoo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo ka socda Windows 10.
KinoConsole waxay ku dhejisaa cayaarahaaga PC qalabkaaga Android
Ku rakib serverka kombuyuutarkaaga iyo barnaamijka mobiladaada waxaadna diyaar u noqon doontaa inaad ku raaxeysato ciyaaraha ugu fiican shaashadda taleefankaaga casriga ah ee KinoConsole.
Khadka dhulka hoostiisa mara ee Amazon, barnaamijyada bilaashka ah ee bilaashka ah iyo ciyaaraha fiidiyowga ee lagu beddelayo "barnaamijka bilaashka ah ee maalinta"
Haddii aad rabto inaad hesho gebi ahaanba bilaashka fiidiyowga fiidiyowga iyada oo aan micropayments iyo tayo sare leh, Amazon Underground ayaa jawaab u ah.
Amazon ayaa dib ugu soo laabatay dagaalka iyadoo wata xirmo kale oo bilaash ah iyo ciyaaro lagu qiimeeyay € 90
Amazon waxay keeneysaa xirmo kale oo ah barnaamijyo iyo ciyaaro fiidiyow ah oo lagu qiimeeyay € 90 taas oo aan ka heli karno weyn Qabille Ri 'oo ah mid ka mid ah iibsiyada ugu fiican.
Vulkan, soo jeedinta Google ee lagu hagaajinayo sawirada iyo ciyaaraha fiidiyowga ee Android
Iyada oo Vulkan la filayo inay awood u leedahay inay soo bandhigto muuqaallo murugsan isla markaana yareyso adeegsiga processor-ka si loo helo waxqabad wanaagsan oo looxyada ku jira.
Shimbiraha Xanaaqsan 2 hadda waxaa laga heli karaa Play Store maalinta ay soo baxayaan. Isku xigxiga mid ka mid ah sagaaska ugu caansan ee qalabka mobilada ayaa halkan ah.
Hoyga dhaca ayaa laga sii dayn doonaa Android bisha Ogosto 13
Ogosto 13 waa taariikhda ay doorteen Bethesda Studios lafteeda si loogu bilaabo daahfurka Holo-dhaca Fallout ee Android oo leh dabeecad iyo cadaw cusub.
Hearthstone's soo socda 'The Grand Tournament' ballaarinta ayaa imaaneysa bisha Ogosto
Blizzard wuxuu horey u diyaariyay balaarin cusub 'Tartankii weynaa' ee Hearthstone si loo bilaabo Ogosto
SNK waxay ku leedahay fiidiyowyo fiidiyow ah oo fiidiyow ah dukaanka Play-ka iyo inay ka dhigto iibka xagaaga qiimaha € 0,99
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android ee lagu ciyaaro WC: Maanta, Ciyaaraha WC
Qeyb cusub oo ku jirta Androidsis halkaas oo aan ku soo bandhigno kulamada ugu wanaagsan ee Android ee lagu ciyaaro WC, maanta waxaan ku bilaabaynaa Ciyaaraha WC.
30-ka Luulyo waa taariikhda uu doortay Rovio inuu ku soo bandhigo Shimbiraha careysan 2 ee Android. Shimbiraha duurjoogta ah mar kale taleefankaaga casriga ah.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android ee loogu talagalay carruurta laga bilaabo 4 illaa 8 sano: Maanta, Bo's Jigsaw Puzzles
Maanta Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android ee loogu talagalay carruurta laga bilaabo 4 illaa 8 sano jir waxaan soo bandhigeynaa Bo's Jigsaw Puzzles, oo ah ciyaar xamaasad xasaasi ah oo loo arko inay gebi ahaanba ammaan u tahay carruurta guriga ku jirta.
U duulo dusha sare adigoon xakameynin Aynu Ku Tagno Gantaal
Aynu tagno Gantaalku wuxuu noqon karaa nooc ka mid ah shimbiraha Flappy ee qaabka sawirka leh oo leh gantaal inuu yahay halyeeyada ugu weyn.
Uunka ku keen guriga adoo adeegsanaya codkaaga 'The WUUUUUUUUUUUUUU'
U adeegso codkaaga si aad uga caawiso noolaha inay ku noqdaan guryahooda kulankan fiidiyowga ah ee loo yaqaan The WUUUUUUUUUUUUUU.
Badbaadinta bani'aadamnimada meelaha ay ka taliyaan gantaal ku yaal 'Escape'
Baxsadku waa ciyaar fiidiyow ah oo leh tayo farsamo oo weyn oo na dhigeysa kontaroolada gantaal meel bannaan oo ay tahay inuu badbaadiyo aadanaha.
Ramboat: Halyeeyada toogashada, noqo Rambo qaab ciyaareed aad u wanaagsan
Arcade frenetic ah oo na dhigeysa booska aan ku noqoneyno geesiga dhabta ah ee hubka leh Ramboat: Halyeeyada toogashada
Maxaa naga sugaya Minecraft Pocket Edition 0.12
Nooca 0.12 wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah cusbooneysiinta ugu weyn ee loo yaqaan 'Minecraft Pocket Edition'. Lagu dhawaaqay tan iyo MineCon 2015.
Ciyaaraha 'TellTale Games' Minecraft: Habka sheeko ayaa ku soo wajahan Android dabayaaqada sanadkan
Minecraft: Habka sheekada ee cayaaraha TellTale ayaa kaa dhex mari doona sheeko xiisa badan iyada oo loo marayo meelaha ugu caansan adduunkaaga.
The fudud oo la qabatimo ee ciyaar fiidiyoow leh Ding Dong
Ding Dong waa sharad oo ah ciyaar fiidiyoow fudud oo toosan laakiin leh qadar weyn oo balwado ah si aad ugu xirnaato adigoon istaagin.
Seefta Xolan, oo ah madal aad u fiican iyo ciyaar fiidiyoow ah oo ku saabsan qaabka ugu caansan ee cirfiidka 'N Goblins'
Seefta Xolan waa mid ka mid ah aaladaha leh tayada ugu sareysa ee aan ku aragnay muddooyinkii ugu dambeeyay Android. Heerarkeeda ballaadhan, muuqaalkeed muuqaal ahaaneed ...
Naga dhex dhinta, qofkii ugu horreeyay ee toogta si uu ugu qanco dilka zombies
Dhimashada dhexdeenna waa qofkii ugu horreeyay ee toogasho ah oo kaa hor dhigaya zombies fara badan iyo inaad u baahan tahay inaad ka takhalusto qiimo kasta.
Vainglory, MOBA oo leh tayo farsamo oo weyn oo soo socota LOL iyo kuwa kale
2 GB waa booska Vainglory uu u baahan yahay in lagu rakibo qalabkaaga Android oo si buuxda ugu raaxeysta MOBA kulamada ugu fiican ee khadka tooska ah.
Hoyga Fallout waxaa lagu sii deyn doonaa Android bisha Ogosto
Bisha Ogosto ee soo socota waxaan awoodi doonnaa inaan ka galno Hoyga burburka ee Dukaanka Play-ka si aan uga baranno meesha ay ka dhigan tahay qaadashada hoyga nukliyeerka.
Dagaalkii Qabaa’illada Ayaa Heshaa Horyaallo Cusub, Muruqyo Cusub, iyo In Ka Badan Oo Ah Cusboonaysiin Weyn
Isku dhaca qabiilooyinka wuxuu helaa waqtiyo cusub, horyaallo cusub iyo waxyaabo kale oo badan oo ku saabsan cusbooneysiinta cusub ee maanta timid ee loogu tala galay taageerayaasha ciyaartan.
Ciyaaraha ugu fiican ee Android ee loogu talagalay carruurta laga bilaabo 4 illaa 8 sano: Maanta, Lego Juniors Quest
Maanta waxaan daahfureynaa qaybta ugu wanaagsan ciyaaraha Android ee loogu talagalay carruurta 4 ilaa 8 sano jir ah oo leh Lego Juniors Quest, ciyaar xasaasi ah oo ammaan ah oo ka socota warshad Lego oo ku farxi doonta kuwa yaryar ee guriga jooga
Dab afka kaga qaad FireWhip oo qabatimaysa
Kulayllo ayaad ku baabi'in doontaa dhammaan cadaawayaasha kulankaan fudud ee fudud ee loo yaqaan Firewhip for Android. Dhammaan waxyaabaha ku jira hal lacag bixin.
Tartanka Superbike World wuxuu la soo noqonayaa SBK15 taleefankaaga casriga ah ee Android
Dhamaan xiisaha Superbike World Championship ee taleefankaaga casriga ah ee 'Android' oo wata 'SBK15'. Ciyaar fiidiyow ah oo lama huraan ah.
Ku hag askartaada guusha Tiny Troopers 2: Ops Gaarka ah
Chillingo wuxuu noo keenayaa taxanaha Tiny Troopers 2: Ops Gaarka ah ee Android si loo sii wado baashaalka cinwaankii hore naga tagay.
Siege, oo cusub oo laga keenay Gameloft ee loo yaqaan 'Clash of Clans-style strategy'
Siege waa sharadka cusub ee Gameloft oo leh waxyaabo badan oo la mid ah Isku dhaca Qabiilooyinka, markaa u diyaar garow inaad dhisto saldhiggaaga.
Hore u sii amro halyeeygaaga bilaashka ah adoo iska diiwaangelinaya imaatinka MOBA ee bisha Luulyo 2
Vainglory waxaa la sii dayn doonaa July 2. Waxaan ku tusineynaa sida loo helo halyeey aad jeceshahay adiga oo iska diiwaangelinaya daah-furkiisa bogga laftiisa.
Amazon waxay siisaa 60 euro codsiyada la bixiyo iyo ciyaaro lagu soo dhaweynayo xagaaga
Amazon waxay na siineysaa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada la bixiyay iyo xirmooyinka ciyaarta fiidiyowga ee lagu qiimeeyo € 60 si loogu dabaaldego imaatinka xagaaga.
Dooxada Taallada iyo ballaadhinteeda Ida's Dream oo bilaash ah Amazon
Dukaanka App-ka Amazon waxaad ka heli kartaa bilaash cutubka cusub ee Ida's Dream iyo Monument Valley, oo ah mid ka mid ah cayaaraha fiidiyaha ee ugu wanaagsan.
LEGO Minifigures Online oo diyaar u ah in lagu soo bandhigo Android dhammaadka bisha
LEGO Minifigures Online waa ciyaar fiidiyoow ah oo ujeedadeedu tahay inuu isu keeno dhammaan noocyada ciyaartoy ee ka kala socda dhufto ee kala duwan isla internetka joogtada ah.
Xeebta Dembiyada, ama maxaa musuqmaasuq ugu dhici lahaa Miami taleefankaaga casriga ah
Xeebta Dembiyada waa ciyaar xiiso leh oo aan ka mid noqono koox dambiilayaal ah oo yaqaan oo kaliya sida wax loo xado, loo musuqmaasuqo kuwa kale loona qasmo.
Force Jungle Force, RPG oo leh dagaal ku saleysan leex leexsi si aad keynta ugu dhigto cagahaaga
Jungle Force waa RPG oo sawiraya waxa uu ahaa sheekadii Final Fantasy taas oo ina siineysa dagaal ku saleysan isweydaarsi ku saabsan xayawaanka kaymaha sida protas.
Ku noqo koox dhab ah Troll Face Quest nasiib darro
Troll Face Quest Unlucky waxay soo saartaa kooxdaas troll ee aan dhamaanteen haysanno waxoogaa yar taasna waxay naga dhigeysaa inaan banaanka u saarno muddo dheer.
Tower Slash, oo ah ciyaar arcade ah oo xamaasad badan leh si aad ugu degto neerfahaaga
Fuulo munaaradda adoo ka takhalusaya ilaalada si aad uhesho amiirkaaga, ama waa waxa looyaqaano Tower Slash inuu sameeyo.
Sida loola wadaago barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyaha ee laga soo iibsaday Android qoyska
Waxaan ku baraynaa inaad wadaagto dhammaan barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyaha ee laga soo iibsaday Play Store si qof kale oo qoyska ka tirsan uu ugu raaxeysto.
Ciyaaraha Diiwaangelinta +, barnaamijka Samsung ee aaladaha Galaxy ee duuba ciyaaraha ciyaarta fiidiyowga
Ciyaarahaaga ciyaaraha aad jeceshahay waxaa laga duubi karaa qalabkaaga Samsung Galaxy laga bilaabo maanta iyada oo la socota Rikoodh Game +
Halyeeyada Hearthstone ee Warcraft ayaa helaya Cusboonaysiin Weyn oo leh Tavern Brawls, Halyeeyo Cusub, iyo Inbadan
Maanta Hearthstone Heroes of Warcraft waxaa loo cusbooneysiiyay nooc cusub oo weyn oo leh war weyn oo macnaheedu yahay qaabka cusub ee lagu dagaallamayo Tarvern.
Hoyga burburka ee Bethesda ee wadada loo maro Android
Hoyga Fallout ee Bethesda ayaa u imanaya Android si dhakhso leh si uu kuu dhigo doorka maaraynta hoyga bartamaha dhibaatada nukliyeerka.
Tooshka ayaa imanaya Android sanadkan
Tooshlight wuxuu ku degi doonaa Android dhamaadka sanadka isagoo wata nooc yare oo loo diyaariyey aaladaha mobilada laga soo bilaabo xoqida.
Tiki Taka Soccer, macquul ahaan ciyaarta kubbadda cagta ee ugu wanaagsan Android
Waxay ahayd waqtigii aan lahaan lahayn ciyaar kubbadda cagta ah oo lagu sharraxay nooc kale oo gameplay ah isla markaana waxaan leenahay sababo waaweyn oo aan uga mid noqonno kuwa ugu fiican
Brickies, oo siinaya maroojin wixii ahaa halyeeygii Arkanoid
Arkanoid wuxuu ahaa ciyaar khuraafaad ah dhamaadkii 80-maadkii Noodlecake Studios-na wuxuu noo keenay iyadoo la raacayo ciyaar wanaag iyo dhamaan tayada ay ku siiso cayaaraheeda.
Ma rabtaa inaad noqoto tababaraha koox kubbadda cagta ah oo caan ah? Hadday sidaas tahay, Maareeyaha Fantasy Kubadda Cagta 2015 waa ciyaartaada loogu talagalay Android
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Fantasy Manager Football 2015, ciyaar xamaasad leh oo loogu talagalay android taas oo noo oggolaan doonta inaan noqono tababaraha kubada cagta koox ka mid ah ciyaartoy caan ah oo xul ah oo aan iska saxeexnay.
Raha karate ee Green Ninja: Sanadka Riyadu wuxuu kugu sugayaa laadkiisa dilaaga ah
Green NInja: Sannadka Riyadu waa ciyaar fiidiyoow ah oo xiiso leh oo leh dabeecad weyn oo u maleyneysa inuu yahay Bruce Lee oo uu yahay raha dusha sare.
Dagaallada Shimbiraha Xanaaqsan waa sharad xiiso Rovio ah oo loogu talagalay waxa ka mid ah noocyada ugu burbursan ee ka jira Bakhaarka Play Store.
Doodle Draw, ciyaartii ugu horreysay ee fiidiyow ee loogu talagalay Facebook Messenger
Facebook Messenger wuxuu ku daraa ciyaartiisii ​​ugu horreysay ee fiidiyow ee loo yaqaan Doodle Draw, taas oo ah nooc ka mid ah Qaamuuska lagu sawiro walxaha.
Hitman: Toogte, dib ugu soo noqoshada gacan ku dhiiglaha cadcad ee Android
Hitman: Sniper waa soo noqoshada Square Enix oo leh gacan ku dhiigle cad cad oo aan marar badan ku aragnay dhulalka kale.
Yak Dash: Geesaha Sharafta, madadaalo iyo tartamo badan oo taxaddar la'aan leh ayaa leh Yak
Yak Dash: Geeska geeska ayaa ammaantaada dhabarkaaga yaakada kuu dhigeysa si aad ugu guuleysato tartamada oo aad ugu qosasho sharadkiisa khafiifka iyo xiisaha badan.
Sheeko weyn ayaa kugu sugeysa jawharadkan yar ee loo yaqaan 'Nubs' Adventure
Nub's Adventure wuxuu leeyahay anigu garan maayo waxa, taas oo u janjeerta inay nagu xirto waxyaabo badan oo isku dhafan. Madal weyn.
Minecraft Pocket Edition waxay ku heshaa maqaarka lacag bixinta, jaakbotyada iyo waxyaabo kale oo badan qeybta cusub
Minecraft Pocket Edition waxaa lagu cusbooneysiiyaa dhowr astaamo oo cusub sida maqaarka lacag bixinta iyo bilaashka ah, iyo maxay yihiin doomaha lagu raaco xayawaankaaga.
Kamcord wuxuu ka bilaabay Android si uu u duubo fiidiyowga ciyaar kasta oo fiidiyoow ah oo ku saabsan qalabkaaga gacanta
Kamcord waa barnaamij u oggolaanaya duubista cayaaraha ciyaarta oo diiradda saaraya tan tanna ugu dambeyntii ku timid Android.
Nihilumbra, adduun aad u ballaadhan oo lagu baadho ayaa kugu sugaya adiga oo ka buuxa xujooyinka iyo astaamaha
Nihilumbra waa sharad ka socota istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee dhulkeena kaas oo bixiya sheeko weyn, xujooyin wanaagsan iyo muuqaal muuqaal weyn.
Kung Fury: Street Rage, waa qaab ciyaareed caadi ah oo laad iyo feedh bidix iyo midig ah
Garaacista bidix iyo midig waxay kugu sugayaan Kung Fury: Street Rage iyo dhadhankaas arcade ee kuwa buuxiyay arcade
Square Enix wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka iyadoo la socota orodyahanka aan dhamaadka lahayn ee Lara Croft: Relic Run
Square Enix wuxuu noo keenayaa orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh Lara sida halyeeyada Lara Croft: Relix Run
Meelaha Dunida ee Khatarta Yar, oo sifiican u xayeysiiya Game Boy-style
Waxaan wajaheynaa arcade u gudbi kara sidii ay ahayd mid ka mid ah Gameboy lafteeda iyadoo saacado badan la ciyaarayo. Kani waa Dungoons Khatar Yar.
Supercell wuxuu $ 5 milyan ka sameeyaa maalintii Dagaalkii Qabiilooyinka
Isku dhaca Qabiilooyinka ayaa ah tusaalaha ugu badan ee faa iidooyinka uu moodeelka freemium uu siiyo tiro wanaagsan oo ah ciyaaraha fiidiyowga
Midabada United waa ciyaar xujo ah oo diyaar u ah inay tijaabiso maskaxdaada maskaxeed
Midabada United waa ciyaar midab u dhiganta oo isku dayi doonta inay kaa dhigto inaad tuujiso nuuroonnada ku jira arrintaada cawlan
Kama safrayaan, ciyaar fiidiyow ah oo istiraatiiji ah oo wadista naftaada ah ayaa kugu soo food leh
Maaha Safar waa mid ka mid ah ciyaaraha gaarka ah ee aan ku leenahay Android taasna lafteeda waa mid asal ah markii lala kulmo jilid istiraatiijiyad badan leh.
Dunida Jurassic: Ciyaarta, Dhis Meel Gaagaaban Dinosaur Theme Park
Dunida Jurassic waa mid kale oo dhista ciyaartaada aasaasiga ah inkasta oo halkan ay ku taal xadiiqad mawduuc halkaas oo dinosaurs aad u waaweyn nolosha lagu soo bandhigo
Skiing Yeti Mountain ama ciyaarta barafka ugu fiican ee xilligan la joogo
Skiing Yeti Mountain waa ciyaar fiidiyoow cajiib ah oo ku siinaysa dareenka barafka
Ka baxso zombies-ka adigoo isticmaalaya pickaxe leh Miner Z
Haddii aan isku darsanno Minecraft iyo Pocket Zombie 2 waxaan lahaan laheyn nooc ka mid ah Miner Z halkaasoo xasuuqii zombie-ka uu ku degay meeraha
Wadada Temple, xakamee raha boodaya oo la rumeysan yahay inuu yahay Indiana Jones
Wadada Temple waxay raacdaa raadadka Flappy Bird marka la eego ciyaarta fiidiyowga ee dhibaatada aadka u daran laakiin taasi waxay kaa ilaalin doontaa inaad ku xirnaato
Astrowings2: Halyeeyada Halyeeyada, 3D dilaa wanaagsan oo Martian u ah taleefankaaga Android
Astrowings2: Halyeeyga Halyeeyada ayaa u taagan dhowr waxyaalood: qaabkeeda 'Shading Cell' iyo inuu noqdo dilaa 3D Martian ah
Star Trek Trexels, sahamiso koonka adigu xiddigtaada oo iska difaac Klingons-ka
Star Trek Trexel waa ciyaarta ugu fiican ee fiidiyowga loogu talagalay trekkies iyo kuwa jecel sheekooyinka sayniska, maadaama ay adiga kugu amreyso markab interstellar ah
Codsiyo aan la aqbali karin oo loogu talagalay Android: Maanta, AorK2 ciyaarta caadiga ah ee hangman si aad ula tartanto asxaabtaada
Maanta waxaan soo bandhigeynaa codsigii ugu horreeyay ee soo-saare cusub oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan ciyaarno ciyaarta caadiga ah ee hangman iyo xitaa inaan la tartanno asxaabteena iyo cadawgeena.
Amazon waxay kusoo laabanaysaa dagaalka iyadoo in kabadan € 125 barnaamijyada la bixiyo iyo ciyaaraha fiidiyowga ee bilaashka ah
Amazon waxay ku laabanaysaa rarka hadiyad guga oo ka kooban € 125 barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyowga, kuwaas oo aad ka heli doontid Game of Thrones
Ciyaartii asalka ahayd ee masaska oo hadda laga heli karo Google Play Store
Hadda waa la heli karaa si looga soo dejiyo ciyaarta asalka ah ee masaska Google Play Store bilaash.
Noqo kuugga sare ee makhaayad Jabbaan ah oo leh 'The Ramen Sensei', oo ah kan ugu cusub shirkadda Kairosoft
Kairosoft mar kale ayuu la yimid cinwaan kuu dhigaya kabaha aad ku noqon karto kuugga sare ee cunnada caadiga ah ee Jabbaan loo yaqaan Ramen with The Ramen Sensei
Tilmaan oo toogasho hareeraha geeska aaladda leh Point Blank Adventures
Namco Bandai wuxuu noo keenayaa Point Blank Adventures, oo u jeesanaysa muuqaal caan ah si loo tilmaamo loona toogto wax kasta oo shaashadda ku dhaqaaqa
Abuureyaasha jilitaanka Riyuhu waxay keenaan GoatZ, oo ah naxdin badbaado oo zombie ah oo kugu xiri doonta caqligeeda caafimaad
GoatZ wuu ku cusub yahay abuurayaasha Ri 'Simulator wuxuuna isku dayaa inuu noqdo ari waalan oo ay tahay inuu wajaho xasuuqii zombie
Ram zombies aan joogsi lahayn oo leh Earn in loo dhinto 2
Earn to Die 2 wuxuu la yimaadaa wax badan oo isku mid ah laakiin leh tiro badan, gawaari ka fiican iyo hawlgallo ka badan kii ka horreeyay, maxaad sugeysaa inaad rakibto?
Sega waxay hawlgab ka dhigi doontaa tiro badan oo ka mid ah cajaladaha fiidiyaha ee fiidiyaha toddobaadyada soo socda
SEGA waxay kala bixi doontaa tiro wanaagsan oo ah fiidiyowga moobiilka dukaamada Android, iOS, Samsung iyo Amazon toddobaadyada soo socda
Dhimashada Kombat X hadda waa loo heli karaa qof walba oo jooga Dukaanka Play
Dhimashada Kombat X waa mid ka mid ah cayaaraha dhiiga ugu badan iyo rabshadaha badan leh ee aad ka heli karto Play Store. Waa lagaa digay
Pinball Sniper, ku sifee ujeedkaaga ciyaar fiidiyow ah oo caadi ah
GEMS-yadaas waa inay ku baaba'aan sabuuradda loo yaqaan 'pinball sabuuradda' ee aad ku haysato shaashaddaada horteeda oo loo yaqaan 'Pinball Sniper'
Farshaxanka lagu baabi'inayo farshaxanka Bears vs. Farshaxanka, cusub ee Halfbrick
Farshaxanka jebinta sawirada waa mid ka mid ah ujeedooyinka Halfbrick-ka cusub waxaana loo yaqaan Bears vs. Qod
TinyKeep, guurguur god god leh oo tayo sare leh oo farsamo leh isla markaana dalbanaya xagga waxqabadka
TinyKeep wuxuu kaa tagi doonaa iyadoo indhahaagu furan yihiin markaad ciyaareyso ciyaartaada ugu horeysa maadaama ay leedahay dhamaan maaddooyinka inay noqdaan kuwa ugu fiican nooceeda
Da 'Broken Age, oo loo yaqaan' masterpiece as a graphic adventure '
Ugu dambayntii Da 'Broken Age ayaa halkan jooga, oo ah ujeedo tayo sare leh oo jaantus ah oo naga qaadi doonta sheekooyinka labadeeda jilaa
Ciyaaraha balwadda leh ee loogu talagalay Android: Maanta, Wadada Crossy ama maxay digaagdu u dhaaftay wadada?
Maanta qaybta ciyaaraha balwadda leh ee loogu talagalay Android, waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno Crossy Road, ciyaartii ugu fiicnayd ee aan qiyaasi karno laakiin taas oo ah dareenka xilligan.
Burcad Badeed, Rovio cusub oo la tartamaysa Dagaalkii Qabiilooyinka
Rovio wuxuu bilaabayaa ciyaar sida loo yaqaan 'Clash of Clans with Plunder Pirates' si uu ula tartamo, inkasta oo mawduuc looga hadlayo burcad badeedda
Waa inuu dhiibaa, orodyahan aan dhammaad lahayn oo arcade ah oo leh zombies badan
Waa Inuu Dhaafiyo waa orodyahan caan ah oo aan dhammaad lahayn, oo leh zombies badan iyo farshaxan muuqaal ah oo pixelated ah oo aadan sinaba u seegi karin
EA Sports UFC, ciyaar fiidiyoow faneed isku dhafan oo cajiib ah
EA Sports UFC waxay soo bandhigeysaa tayada dhinacyada oo dhan si ay noogu keento kulamada isku dhafka ah ee isku dhafka ah
Dhimashada ugu dhiig daadashada badan waxay ku soo gaadhaa taleefankaaga casriga ah Mortal Kombat X
Mortal Kombat X wuxuu kuugu yimaadaa taleefankaaga Android dhibaatooyinka ugu daran iyo dagaalka ugu dhabta ah ee jira
Hay Day waxay heshaa nooc cusub oo leh hagaajinta ciyaarta derbiga, xayawaannada cusub iyo waxyaabo kaloo badan
Cusbooneysiinta cusub ee Hay Day ayaa la timid hadafkii loo dhigay darbiyada iyo waxyaabo cusub sida mascot iyo laba mishiin oo cusub
Ciyaaraha Qabatimay ee Android: Maanta, Hawsha Hawada
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa qaybta ciyaaraha balwadda leh ee loogu talagalay Android, Space Liner, ciyaar leh nidaam xakameyn dabeecad casri ah oo naga xiri doonta ilbidhiqsiga koowaad.
Corridor Z, oo siinaya orodyahanno aan dhammaad lahayn iyo zombies qallooc ah
Corridor Z wuxuu kaga duwan yahay orodyahanada kale ee aan dhamaadka lahayn aragtideeda leexsan iyo mawduuceda zombie-ka ee soo jiidata wax badan
Implosion, khayaano mustaqbal oo qurux badan iyo xoqid aanad seegi karin
Imtixaanku wuxuu kuu keenayaa shaashadda taleefankaaga casriga ah dhammaan qashinka garaafka ah ee aad ka filan karto jabsiga weyn iyo burburka. Muhiim ah
Raac masduulaagii oo ugaarsada Knights la Dragon weyn Hills
Dragon Hills waa mid ka mid ah arcadada ugu wanaagsan bilihii dhowaa ee yimid Android. Raac masduulaagii xanaaqsanaa oo baabi'iya deegaanka
Amazon waxay ku bixisaa in ka badan € 120 barnaamijyada lacagta lagu bixiyo iyo ciyaaraha fiidiyowga
26 barnaamijyadooda la bixiyo iyo ciyaaraha fiidiyowga ee lagu qiimeeyo in ka badan € 120 ayaa ah baakadka cusub ee bilaashka ah ee ka imanaya Amazon
Google wuxuu mamnuucayaa ciyaarta boostada ee keydkeeda abka
Google ayaa ka mamnuucday barnaamijka Boosta ee loogu tala galay Android bakhaarkeeda App. Qiyaas aan macquul ahayn, in kastoo nasiib wanaag laga iibsan karo Amazon